Koobka General Daa’uud oo galabta lasoo gaba gabeeyn doono – Gool FM
Koobka General Daa’uud oo galabta lasoo gaba gabeeyn doono
(Soomaaliya) 18 Okt 2018. Waxaa galabta lagu wada in la soo gaba gabeeyo tartanka xiisaha badan ee koobka General Daa’uud.
Tartanka General Daa’uud ayaa soo bilaawday 21-kii bishii September aynu soo dhaafnay, waxaana koobkan ka qeyb galayay ilaa 16-kooxod oo kala duwan.
Koobka General Daa’uud waa Tartanka ugu xiisaha badan marka laga yimaado horyaalka Somali Primer League, ciyaaristiisa waxaa la bilaaway sanadkii 1971/2.
Kooxaha Horseed iyo Banadir Sports Club ayaa galabta isku fara saari doona garoonka Banadir Stadium ciyaarta kama dambeysta finaalka Koobka General Daa’uud.
Horseed kulankii ugu dambeyay waxey rigooroyin ugu soo adkaatay kooxda Dekedda ciyaar la isku xeeqay waqtigii loogu tala galay waxey ku soo dhamaatay bar baro 1-1. Balse waxaa la isla aaday gool ku laad, Horseed ayaa ku adkaatay 5-4 rigooroyin.
Naadiga Banadir Kulan ciyaareedkii ugu dambeyay waxey guul dahabi ah ka soo gaareyn naadiga Bandhiga fiican sanadkan ka sameysay koobka General Daa’uud ee Saxafi Fc, Ciyaar ku soo dhamaatay 2-1.
Horseed waxey maankeyda ku heesan iney gacanta ku dhigto markii 8-aad tartanka General Daa’uud hore waxey ugu soo guuleysatay 7-jeer, lakiin isla xisaabtanka Wiilasha Banadir ayaa caqad ku noqon kara Horseed Maadama ay Banadir rabto iney ku guuleysato markii 3-aad koobkan, hore waxey u soo qaaday tiro labo jeer.
Banadir koobkan waxaa ugu dambeysay sanadkii 2012-kii halka Horseed ay gacanta ku dhigtay sanadkii 2015-kii.
Tartanka: General Daa’uud
Kooxaha: Horseed Vs Banadir Sports Club
Miyuu dib ugu laaban doonaa James Rodríguez kooxda Real Madrid? _ waxaa ka jawaabaya Halyayga reer Colombia Carlos Valderrama
Giorgio Chiellini oo go'aamiyay sida uu ka yeeli doono mustaqbalkiisa, kadib marka uu ka fariisto xifada kubada cagta